Shina mofomamy mofomamy vita amin'ny sôkôla manja vita amin'ny vy vita amin'ny sôkôla ho an'ny mpanamboatra sy ny mpamatsy | Jingqi
Quantity Order Minimum:
Kitapo 5pcs / fanoherana
Momba ny sôkôla
Mofomamy sôkôla, tady milay misy ranomandry
10.8 21.5 * * 1.8cm
5pcs / fanoherana Bag
Volavola misy lasantsy vita amin'ny sôkôla miorim-bary amin'ny alàlan'ny robotso misy rongony 12
Afaka miditra amin'ny fanasana vilia ve ny làlan-dranomandry silicone?
Ireo làlan-dranomandry silicone ity dia azo antoka amin'ny fanasana vilia, ka azonao ampiasaina mora foana azy ireo. Atsipazo ao anaty paosin-tampony fotsiny izy ireo ary sasao ny lovia toy ny mahazatra.
Anaran'ny vokatra Volavola misy lasantsy vita amin'ny sôkôla miorim-bary amin'ny alàlan'ny robotso misy rongony 12
fampiasana Mofomamy sôkôla, ny lalamby Ice
fonosana Kitapo 5pcs / fanoherana
habe: 10.8 21.5 * * 1.8cm
lanja 52g / PC
Angamba! Ny silicone dia tsy misy BPA, ka tsara eo anoloanao ianao raha misafidy plastika silicone ho solon'ny plastika. Raha karazana plastika ny plastika, ny silicone dia vovon-tsolika marefo vita amin'ny silica - fantatra tsara kokoa noho ny fasika amin'ny junkie mahazatra amin'ny moron-dranomasina. Ny tady misy ranomandry silicone dia malefaka sy madiodio, ary toa tsy milentika ireo akora simika amin'ny sakafo na rano amin'ny hafanana mangatsiaka. Na dia niparitaka aza ny tatitra momba ny fandehanana silicone ho an'ny sakafo amin'ny hafanana be dia be - eritrereto ny paiso vita amin'ny fanaovana mofo sy ny bobongolo. Raha BPA manahy ianao dia ny safotra ranomandry silicone dia safidy tsara kokoa noho ny plastika.
Tokony hitady làlambe Silicone maimaimpoana BPA ve aho?
Ny silicone rehetra dia tsy misy BPA, ka izay karazana marika famantarana dia mitovy amin'ny fanaovana siramamy latabatra amin'ny alàlan'ny gluten. Mazava ho azy, marina, saingy tsy toy ny miavaka izany na somary hafa noho ny safidy hafa mitovy noho io fanendrena io.
Ny plastika tsy misy BPA, amin'ny lafiny iray, somary miavaka. Plastika marolafy maro no misy an'io zavatra io, noho izany dia mitady ireo zavatra izay voamarina fa tsy misy BPA no fomba tsara hiarovana ny tenanao sy ny fianakavianao tsy hananana zavatra simika fanampiny amin'ny sakafonao.
silicone mamy mamy,
bobongolo sôkôla silicone
Manaraka: Soavaly goavam-pandeha milomano anaty tranokala Silicone ho an'ny Swimswim sy Mpanazatra Fandroana
Habe XL habe amin'ny sakafo ara-tsakafo Silicone Food Pres ...
Jumbo Diamond Silicone Ice Ball Mofon-tsakafo
BPA maimaim-poana Mr.
Solika ranomandry silicone baolina, ranomandry manokana ...
Loko mainty 29ML silicone mihazona tavoahangy feno ny PP ...
FDA Silicone spatula napetraka miaraka amina plastika ...